Madaxda M/Goboleedyada oo weli kulamo u socda iyo XOG laga helay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa xalay kulamo gaar gaar ah ku yeeshay Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada dalka oo weli ku sugan halkaas, kadib markii fashilmay Shirkii Madaxda ee qabsoomay.
Kulanka dhexmaray Madaxda maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa looga hadlaayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka ka taagan qabsoomida doorashooyinka dalka.
Madaxda ayaa siweyn uga dooday sida lagu xalin karo is marin waaga ka taagan doorashada, kadib markii uu fashilmay Shirkii Madaxda dowladda, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee dhacay Magaalada Dhuusamareeb.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Madaxweyneyaasha maamul Goboleedyada ay War-murtiyeed wadajir ah kasoo saari doonaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka ka jira doorashada oo lagu heshiin waayay.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in madaxda ay sii joogi doonaan Dhuusamareeb illaa labo cisho, waxaa ay ka qeyb geli doonaan Munaasabadda sanad guurada koowaad ee doorashadii Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor.
Si kastaba Shirkii Madaxda dowladda Federaalka, maamulada iyo Gobolka Banaadir ee looga hadlaayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka doorashada ayaa kusoo dhammaaday natiijo la’aan, iyadoona fashilka Shirkaas lagu eedeeyay Jubbaland.
Guddiga Doorashooyinka oo ka hadlay Shirkii Madaxda ee Dhuusamareeb